Imiyalelo emithandathu eSisinyanzelo ngaphambi kokuhambisa iKhadi loShishino | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sidla ngokuzifumana sikwimeko engaqhelekanga apho kufuneka ukuba sibe nekhadi lethu leshishini. Elo xesha sifumana umntu obalulekileyo kuthi. Ngelo xesha linye ukuqala incoko naloo mntu kwaye ushiye inombolo yakho okanye i-imeyile ebhalwe kwimemori yabo. Ke, okomzuzu olindelekileyo, ngeCawa emva kwemini, umamele iselfowuni usazi ukuba nguye. Ke le meko ayisiyiyo enye indlela, kufuneka sazi imiyalelo emithandathu yokuhambisa ikhadi lakho.
Le mithetho ilishumi iya kuba luncedo ukutsala umdla. Ukugcina engqondweni, ukuba unika ikhadi kwi-napkin, awuyi kuba linani elihle. Ukuhambisa ikhadi leshishini kwimeko efanelekileyo kubalulekile. Ke ngoko, baqwalasele aba iingcebiso ezincinci.
1 Musa ukuqokelela idatha nceda
2 Sukuhlala nabantu
3 Khathalela amakhadi akho
4 Musa ukuyila efanayo kuwo wonke umntu
5 Yomeleza igama lakho
6 Ukuchwetheza kunye nokufundeka, umzabalazo ongapheliyo
7 Uya kuba yintsusa
Musa ukuqokelela idatha nceda
Kulinga kakhulu ukwenza uyilo kwaye, nkqu nokubona ukuba lugqityiwe, sifuna ukulugqibezela ngakumbi. Yilapho senza impazamo yokufaka idatha eninzi. Igama, ilogo, inombolo, i-imeyile, njl njl njl njl. Kwaye akukho gumbi lokubona uyilo lwekhadi.
Fumana isishwankathelo esifanelekileyo kunye nenkampani yakho. Cwangcisa umgca omnye okanye emibini yonxibelelwano ubukhulu becala. Kwaye ubhale igama lakho okanye, apho kufanelekileyo, ilogo.
Khumbula, ukuba umntu unekhadi lakho leshishini, kunokwenzeka ukuba badibene nawe kwaye sele besazi ukuba imalunga nantoni. Ikhadi lisebenza nje njengesikhumbuzo. Ke yigcine ilula- ufuna ukugijima kwimemori yabo kwaye ubalathise kwiwebhusayithi yakho, okanye kwenye indawo banokufumana ulwazi ngakumbi.
Nokuba ufuna umsebenzi okanye uyinkampani, iprofayile yakho yabucala ayizukubangela mdla nakubani na. Kwimeko yokujonga unxibelelwano, sebenzisa ezinye iinethiwekhi zentlalo ezinje nge-Linkedin. Zombini ezinye iinkampani kunye nabathengi abanamdla kwinto onayo kwisidlo sakusasa. Alukho uluvo lwakho malunga nesinye isihloko. Ngale nto unokuvala iingcango. Khumbula ukuba ukujonga kuqala kubaluleke kakhulu, zibonakalise njengemfuneko, hayi njengotshaba.
Khathalela amakhadi akho
Akukho nto imbi kumthengi okanye kulindeleke ukuba abe ngumqeshi kunokufumana ikhadi leshishini imibimbi kunye namabala obenawo kumgangatho wesipaji sakho iinyanga. Ke zigcine kwibhokisi ebezisiwe kuyo. Ukuyiphatha engxoweni, kungcono isipaji esivulekileyo okanye ipokotho ethe tye yebhatyi. Ubuncinane ngexesha lokuhamba kwakho, ngelixa uhlala ekhaya, gcina kwindawo evulekile.
Musa ukuyila efanayo kuwo wonke umntu
Njengekharityhulamu, Zonke iinkampani ojamelene nazo azifuni okufanayo kuwe. Baza kujonga iikhrayitheriya ezahlukeneyo xa uqesha umntu okanye urhweba nenkampani yakho. Amakhadi eshishini abaqulunqi bohlobo akufuneki ajongeke njengamakhadi eshishini abayili be-UX, umzekelo. Akunjalo nabantu abafuna ukufikelela kwifemu yomthetho kunendawo yokusebenzela yokuchwela.
Yomeleza igama lakho
Zama ukwenza uphawu lwakho okanye uphawu lomfanekiso kuphela kwikhadi lakho leshishini. Ukuba uprinta kumacala amabini (ekufuneka ukwenzile), kuya kufuneka ufake iinkcukacha zakho zonxibelelwano.
Uyafana nophawu lwakho kwaye abathengi okanye oogxa bakho kufuneka banxulumane nayo kwangoko. Ke sukuphambuka kwimibala yebrand yakho nangayiphi na indlela; iyadida nje.
Ukuchwetheza kunye nokufundeka, umzabalazo ongapheliyo
Ngaphandle kokuba uyi-calligrapher, akukho sizathu sokusebenzisa ifonti yeskripthi kwikhadi lakho lebhizinisi. Ingakhangeleka inqabile, kodwa ukuba awuyiqondi ngokujonga nje, uyalile nje inqaku lekhadi lakho.
Ngamafutshane, qiniseka nje ukuba igama lakho kunye neenkcukacha zonxibelelwano ziboniswa ngokucacileyo. Kwaye gcina isicatshulwa sakho esiphambili ngaphezulu kwe-8pt.
Uya kuba yintsusa
Lo ngowona myalelo ubalulekileyo kuyo yonke: "awusayi kubulala" kuyilo lwamakhadi eshishini. Nokuba uthatha isigqibo sokwenza ntoni kuyilo lwakho, yenze malunga nawe. Yenze ibe yeyentsusa kwaye uyikhumbule. Nokuba kungumyalezo wakho owahlukileyo, ukufomatha okucingisisiweyo, okanye ukusika okufihlakeleyo, yenza abathengi bakho bakukhumbule kwaye uqiniseke ukuba ikhadi lakho aliphoswa ezantsi kwebhegi ukuze iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imiyalelo emithandathu enyanzelekileyo ngaphambi kokunikezela ngeshishini